ဆိုဒ်မှ ထွက်လိုခြင်း..ကိစ္စ။ | PoemsCorner
poems corner..မှ အက်မင် လူကြီးများခင်ဗျာ……..
ကျွန်တော်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆိုဒ်မှ ထွက်လိုပါသဖြင့်…
ကျွန်တော် အား ဆိုဒ်မှာ ထွက်ပေးပါရန် ….
လေးစားစွာ တင်ပြ အကူအညီတောင်းခံပါ သည်…။
In: စကားပြေ Posted By: genius.jinx28 Date: May 18, 2011
လက်ခြင်းယှက်လို့ အတူတူ သွားစို့လား
Leave comment7Comments & 313 views
By: မာယာမင်းသား at May 18, 2011
genius.jinx28 ရေ ဆိုဒ်မှ ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကြောင့်ဆိုတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးပါ့မယ်။ အကောင့် နှင့် ပို့စ် အားလုံးဖျက်ပေးရမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပို့စ်တွေချန်ထားပြီး အကောင့်ပဲဖျက်ပေးရမှာလား၊ အကောင့်ပဲချန်ထားပြီး ပို့စ်တွေအားလုံးဖျက်ပေးရမှာလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကို တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင် ပြန်လာမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် 🙂
By: admin at May 19, 2011
By: genius.jinx28 at May 19, 2011
သေချာစဉ်းစားပါဦး genius.jinx28။ အားပေးထားတဲ့ comment တွေပါ အကုန်ပျက်သွားမှာနော်။ တစ်ခြားအားပေးခံခဲ့ရတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ အခု အစ်ကိုက အကောင့်ဖျက်မယ်ဆိုပြီး တစ်ခြားကဗျာတွေ လိုက်အားပေးပြီး comment တွေရေးနေတာတွေ့ရသေးတယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် အတည်ပြုပါ .. အကုန်ဖျက်မှာသေချာပါသလား 🙂
ရဲလေး ဟေ့ရောင်ရာ ဘာထ ကြောင်တာလဲ … ညီ မသုံးလဲ ရတာပဲကို …. ပို့စ်တွေ မဖျက်ပါနဲ့ကွာ … တမြောစရာကြီး အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပီး သက်သက်ရေး ဒီအကောင့်ကို မသုံးနဲ့တော့ပေါ့ကွ ….ပို့စ်တွေ ဒီတိုင်း ထားလိုက်ပါ ….ပျော်ရွှင်ပါစေကွာ … ဖျက်ပီးရင် ဘာမှ ပြန်မရဘူးနော်…. သေသေချာချာ စဉ်းစားဦးး
By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) at May 19, 2011
By: terry at May 19, 2011
နှောင့်ယှက်တဲ့သူကတွေ့ ကရာပြောနေတော့သိတဲ့လူတွေကအထင်လွဲကုန်လို့ ပါ။
By: genius.jinx28 at May 20, 2011